Pulisic, Icardi, De Vrij, Jorginho, Arthur, Doucoure & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga – Kooxda.com
Home 2018 February Suuqa, Wararka Maanta Pulisic, Icardi, De Vrij, Jorginho, Arthur, Doucoure & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga
February 21, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kooxda chelsea ayaa tartan adag kala kulmaysa kooxda Bayern Munich kuna saabsan baacsiga ay ugu jirto saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Christian Pulisic oo 19 jir ah (Mail).
Daafaca reer Holland iyo kooxda Lazio ee Stefan de Vrij oo 26 jir ah ayaa diyaar u ah in uu u soo dhaqaaqo Premier league waxana uu doonayaa in uu ku biiro kooxda Man United laakiin Everton iyo Arsenal ayaa sidoo kale xiisaynaya (Mirror).
Man United ayaa sidoo kale xiiso u qabta saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Napoli ee Jorginho oo 26 jir ah (Sun).
Kooxda Barcelona ayaa man United ku garaacday saxiixa xiddiga khadka dhexe ee reer Brazil ee Arthur oo 21 jir ah (Mail).
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Watford ee Abdoulaye Doucoure oo 25 jir ah ayaa sheegay in uu doonayo in uu ku biiro kooxda Arsenal (Mirror).
Kooxda Liverpool ayaa isku diyaarinaysa in ay dalab ka gudbiso saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Lyon ee Mohamed Bahlouli oo 18 jir ah (France Football).
Goolhayaha kooxda chelsea ee Thibaut Courtois oo 25 jir ah ayaa mar kale si aan qorsoodi lahayn u shegay in uu doonayo in uu ku laabto Spain (Express).
Kooxda Man United ayaa tartan adag la gali doonta kooxda Real Madrid iyaga oo kula loolami doona saxiixa weeraryahanka kooxda Inter Milan ee Mauro Icardi (Star).